Thaiwan Bubble Tea နဲ့ Fresh Fruits Juice အကောင်းဆုံးဆိုင် – YANGON STYLE
၂၀၂၀ မှာ Bubble Tea ဆိုင်လေးတွေ ရန်ကုန်မှာ တော်တော်များလာတာ သတိထားမိမယ် ထင်ပါတယ်ဗျ။ များလာပေမဲ့ အရသာကောင်းတဲ့ဆိုင် သောက်ရဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ လမ်းဘေးမှာ Bubble Tea ဆိုပြီး ၀ယ်သောက် Bubble Tea မကောင်းပြောရင် အဆင်မပြေပါဘူး။
အဲဒါကြောင့် ဈေးနှုန်းလည်း ပုံမှန်ထက် သက်သာပြီး အရသာလည်း ကောင်းတဲ့ Bubble Tea ‌တစ်ဆိုင်ကို လမ်းညွှန်လိုက်ရပါတယ်။
ဆိုင်လေးက စမ်းချောင်းထဲမှာ Dating လုပ်ဖို့တောင်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်း ၁၂၀၀ကနေ စရတယ်။
ဘာတွေရလဲဆိုရင် Bubble Tea/ Fresh Fruits Juice/ Combination Series/ Smoothies/ Waffle/ Coffee Drink နဲ့ Special Drink ဆိုပြီး Menu ရှိပါတယ်။
Small/ Regular နှစ်မျိုးရှိပြီး Small က ၁၂၀၀ ကျပ်ကနေ စပါတယ်။ ကိုယ် ကြိုက်မယ်ဆိုရင် Topping မှာ Pearl/ Honey ၄၀၀ ရှိပြီး Cheese Cream ဆို ၁၀၀၀ပါ။ ပေါင်းသောက်တာက အရသာကို ပိုထိမိစေတာပေါ့။ တစ်ခွက်နဲ့လည်း ဗိုက်ပြည့်။
Special Drink နဲ့ Recommended ပေးတာကို သောက်ကြည့်ခဲ့တာဆိုရင်
Strawberry Cheese 2500Ks
သူ့အရသာကိုတော့ တော်တော်ကြိုက်ခဲ့တာ။ Regular တစ်မျိုးပဲရှိပြီး ၁၅၀၀ပဲရှိတယ်။ အဲဒါကိုမှ Cheese နဲ့ ရောလိုက်တာ ပိုကောင်းတယ် ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ဖြစ်သွားပြီး စတော်ဘယ်ရီအနံ့လေးနဲ့ Cheese နဲ့ အေးအေးလေး တော်တော်ကောင်းတယ်။
Matcha Latte 2000 Ks
Mocha Latte ဆိုလည်း Regular တစ်မျိုးပဲ။ Mocha Latte နဲ့ Pearl Milk Tea ပေါင်းထားတာ သူ့အရသာက Pearl Milk Tea သောက်တာထက် အရသာပိုကဲ သွားတယ်။
Cheese green Tea 2000Ks
Special Drink ထဲက Special Green Tea သောက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ Cheese ပါတဲ့ အရသာက တော်တော်ကောင်းနေတာ သတိထားမိတယ်။ ရောက်ရင် သောက်ကြည့်ခဲ့ပါ။
Avocado Juice 1500Ks
နွေရာသီလည်း ရောက်တော့မှာဆိုတော့ အသီးဖျော်‌ရည်တွေကလည်း သောက်သင့်ပါတယ်။ အသီးမဟုတ်ဘဲ Juice တောင် တော်တော်ကောင်းနေတာပါ။ ထောပတ်သီးဖျော်ရည် Small ၁၂၀၀ပဲရှိတယ်။ ဒီဈေးနဲ့ ဒီအရသာက တော်တော် တန်နေပြီ‌လို့ ပြောလို့ရတယ်။ Regular သောက်ကြည့်ခဲ့တာ ထောပတ်သီး ပြည့်နှစ်နေတာပဲ။
Pearl Milk Tea Regular 1500Ks
Small ၁၂၀၀နဲ့ Regular ၁၅၀၀ ရှိတယ်။ Matcha Latte နဲ့ ရောသလို မဟုတ်ဘဲ ဆိုင်မှာ ရောင်းကောင်းတဲ့ တစ်ခုထဲမှာပါတယ်။ အရသာက သူ့တစ်မျိုးထဲ ခံစားပြီး သောက်ရမဲ့အရသာပေါ့။
No. 2/4, Chan Thar Street (Near City Mart) San Chaung Township, Yangon.
09 – 407337331